Yutiko: Patinofanira Kunge Takamuka | Dzidzisai Vana Venyu
SARUDZA MUTAURO Albanian Arabic Armenian Bicol Bulgarian Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Finnish French German Greek Gun Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Italian Japanese Kirundi Norwegian Polish Portuguese Romanian Shona Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swedish Thai Ukrainian Vietnamese
Patinofanira Kunge Takamuka
UNGABVUMA kuti zvinokosha kuti kana uri kuchikoro ugare wakamuka. Vakawanda vanokotsira mukirasi, asi kuti udzidze, unofanira kuramba wakamuka. Pamwe unoenda kumisangano kwaunonodzidza Bhaibheri.
Unofunga kuti unofanira kuitei kuti urambe wakamuka?— * Chimwe chinokosha kukurumidza kunorara. Pamwe ungabatsirwawo nokumborara kwemaminitsi mashoma masikati. Ngationei zvatingadzidza pane zvakaitika kumukomana wechiduku akakotsira humwe usiku muapostora Pauro achipa hurukuro. Verenga muBhaibheri pana Mabasa chitsauko 20, ndima 7 kusvika ku12 uone zvakaitika.
Pauro akanga ari kushanyira ungano yaiva muguta raiva nechiteshi chengarava reTroasi. Bhaibheri rinoti Pauro “aizoenda zuva raitevera” nechikepe. Saka “akakurukura kwenguva refu kusvikira pakati pousiku.” Nyaya yacho inoti: “Rimwe jaya rakanga rigere pahwindo, rainzi Yutiko rakabatwa nehope huru Pauro paakaramba achitaura.” Chii chakazoitika?—
Yutiko akadonha nepahwindo a“chibva panhurikidzwa yechitatu.” Pauro nevamwe vakaita chipatapata vachienda pasi paaiva. Yutiko akanga ari pasi, atofa! Ungafungidzira here kusuruvara kwavakaita vose?— Bhaibheri rinoti Pauro akatora Yutiko akamugumbatira. Pasina nguva Pauro akashevedzera nomufaro achiti: ‘Musanetseka henyu, mupenyu!’ Mwari akanga amutsa Yutiko!
Zvakaitika kuna Yutiko zvinotidzidzisei nezvaMwari?— Kuti Baba vedu vokudenga Jehovha vanogona kumutsa vakafa, kusanganisira vana vaduku. Jehovha anokunzwisisa uye anokuda, kutopfuura zvinoita vabereki vako. Jesu paaiva pasi pano, akaita zvairatidza unhu hwaBaba vake paakatora vana vaduku akavakomborera. Akamutsawo vaduku, kusanganisira musikana aiva nemakore 12.
Kuziva kuti Baba vako vokudenga vanokuda kunoita kuti unzwe sei?— Kunoita kuti tidewo Jehovha uye tide kuteerera zvaanotaura. Unoziva here kuti tingaratidza sei kuti tinomuda?— Imwe nzira ndeyokutaura kuti tinomuda. Jesu akati: “Ndinoda Baba.” Asi haana kungogumira pakutaura kuti anoda Mwari. Akazviratidza nemabasa.
Jesu akateerera Mwari. Akati: “Ndinogara ndichiita zvinhu zvinomufadza.” Kana tikateererawo Jehovha kuti timufadze iye neMwanakomana wake Jesu, tichaedza nepatinogona napo kuti tirambe takamuka patinenge tiri kuchikoro uye kumisangano yechiKristu.
Johani 8:29; 14:31
^ ndima 4 Kana uri kuverenga nomwana, kamutsetse ako kari kungokuyeuchidza kumbotura befu uye kukurudzira mwana kuti ataure zvaanofunga.
NHARIREYOMURINDI October 2011